पहिलोचोटी प्रहरी पुग्दा डरले गाउँले लुके « Sthaniya Khabar
पहिलोचोटी प्रहरी पुग्दा डरले गाउँले लुके
प्रकाशित मिति : २८ पुष २०७५, शनिबार ०३:१४
२८ पुस, बाजुरा । गौमुल गाउँपालिका–१ अन्द्राडीमा पहिलो पटक प्रहरी पुग्दा गाउँबासी डराएर लुके । केही महिना अघि आएर बसेको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक हंशराज जोशीको टोलीलाई मदिरा व्यवस्थापन पछिको अवस्था बुझ्नका लागि उक्त गाउँपालिकाले गत सोमबार सुक्ष्म अनुगमनमा अन्द्राडी पठाएकामा स्थानीयवासी डरले लुकेका हुन् ।
प्रहरीलाई देखिसकेका त्यहाँका केही युवाले यी त प्रहरी हुन भनेर कानेखुसी गरे पनि कहिल्यै प्रहरी नदेखेका त्यहाँका वृद्धवृद्धा र बालबालिका भने डराएर प्रहरीसंग बोल्न नै सकेकन । ६० वर्षीय फुगे रोकायाले भने, “तमी को हौँ ? काँ जादाँ भया ? तमी हामी जसा आछिन् । कपडा पनि कसान लगायाका ।”
जवाफमा प्रहरी हबल्दार मनीराज भण्डारीले भने “होइन हामी पनि तपाईं जस्तै मान्छे प्रहरी हौँ । हामी तपाइँहरूको गाउँ अनुगमन गर्न र तपाईहरूकै सुरक्षाका लागि भनेर आएका हौँ । ”
अर्का युवती साऊनी बोहोराले भनिन्, “हामीले प्रहरी देखेकै छैनौँ त्यसैले हामीले त डरले बोल्नसमेत सकेनौँ । यो गाउँमा कोही पनि आउँदैन थिए । अहिले भने अलिअलि आउन लागेको भए पनि हामीले प्रहरी देखेकै थिएनौँ । तर पनि प्रहरी हामी जसा हुदाँ रहेछन् ।”
यस्तै अर्का युवा वर्षीय सौरे बोहराले भने, “प्रहरी हामीभन्दा फरक हुँदा हुन् भनी सोचेको थिएँ, हामी जस्तै हुँदारैछन् ।”
पहिले न नेता आउथे न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका कर्मचारी नै । जब देश सङ्घीयतामा गयो तब आफ्नो गाउँ अन्द्राडीमा जनप्रतिनिधि, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका कर्मचारी अनि प्रहरी आएकोे रोकायले बताए ।
“अन्द्राडीे निकै विकट र पिछडिएको वडा हो । यहाँ न टेलिफोन लाग्छ, नत रेडियो नै बज्छ, हामी सूचनाबाट समेत बाहिर छौँ ।” रोकायको गुनासो थियो,” रोकायले भने । रासस